वनप्लस एक्स, अक्टोबरमा आइपुग्छ Androidsis
वनप्लस एक्स, अक्टुबरमा आइपुग्नेछ
चिनियाँ निर्माता वनप्लसले टिप्पणी गरे जब वनप्लस २ लाई प्रस्तुत गरियो कि उनीहरूले नयाँ टर्मिनल बर्षको अन्त्य हुनु अघि नै शुरू गर्नेछन्। खैर, यस चिनियाँ कम्पनी को संस्थापक, कार्ल पेई, अक्टूबर मा एक सानो टर्मिनल र एक नयाँ फ्लगशिप किलर यस निर्माता द्वारा प्रस्तुत गरिनेछ भनेर पुष्टि गर्नुभयो।
आजको दिनसम्म यस टर्मिनलको बारेमा धेरै कुरा भनिएको छ। धेरैले वनप्लस २ को एक मिनी संस्करणमा देखाए तर चिनियाँ निर्माताको पहिलो टर्मिनलको विवरण सहित। तर जे भए पनि यस्तो देखिन्छ कि, हामी पूर्ण रूपमा नयाँ टर्मिनलको सामना गर्दैछौं जसले यसको फाइदाहरू र यसको समायोजित मूल्यको लागि धन्यवादको बारेमा कुरा गर्न धेरै दिन्छ।
यो स्टार्टअप एकदम छोटो समयको लागि बजारमा भएको छ तर यसले उपभोक्ताहरूबाट सम्मान र केही अन्य आलोचना गरिसकेको छ। यसमा कुनै श is्का छैन कि चिनियाँ कम्पनीले रिलिज गरेको पहिलो स्मार्टफोन बिक्री सफलता थियो र दुई महिना अगाडि वनप्लसले दोस्रो पुस्ता प्रस्तुत गर्‍यो। दोस्रो पुस्ता जुन बजारमा राम्रो आशा राखिएको छ तर जे भए पनि उनीहरूले कम्पनीबाट अपेक्षा गरेनन्। यसका अतिरिक्त उनले हालसालै सफ्टवेयर र टर्मिनल प्राप्त गर्ने तरिकाको बारेमा धेरै आलोचनाहरू प्राप्त गरे, कम्पनीले यसको लागि माफी मागेको कुराले।
अफवाहका अनुसार यो नयाँ उपकरणलेaलाई सामेल गर्दछ १.5..XNUMX इन्च स्क्रीन। हामीलाई यसको रिजोलुसनको बारेमा केही थाहा छैन तर यो निश्चित रूपमा उच्च परिभाषा हो। भित्र हामी फेला पार्दछौं Snapdragon 801, OnePlus One सँग समान SoC। यसको क्यामेरा डुअल र लीक छविहरूको आधारमा हुनेछ, यन्त्रमा राम्रो निर्माण सामग्री हुनेछ।
यस समयमा हामी टर्मिनलको विशिष्टताको बारेमा अलिक बढी वर्णन गर्न सक्दछौं किनकि त्यहाँ रम मेमोरी, रियर क्यामेरा र फ्रन्ट क्यामेरा इत्यादिको मेगापिक्सेल, इत्यादिबारे कुरा गर्ने कुनै अफवाहहरू मात्रै छन्। के हुन्छ यदि हामीसँग अफवाहहरू छन् यसको उपलब्धता र मूल्य हो। यसको उपलब्धताका बारे, वनप्लसले यस फ्ल्यागशिप किलरको बखत प्रस्तुत गर्ने योजना गर्यो अक्टुबर को महिना र यसको मूल्यमा, वनप्लस एक्सले फेरि प्रतिस्पर्धालाई कडा हिर्काउने छ, उपकरणले बिक्री गरिरहेको थियो 250 डलर.
हामी तपाईंलाई उपकरणको रेन्डरको फिल्टर गरिएका चित्रहरूसँग छोड्छौं। वनप्लसले फेरि प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्य राख्दछ। हामी अक्टुबर महिनामा के हुन्छ सावधानीका साथ साथै वनप्लस एक्सको आउँदो प्रस्तुतीकरणमा ध्यान दिनेछौं र तपाईंलाई, तपाइँ चिनियाँ निर्माता को भविष्य टर्मिनल के सोच्नुहुन्छ ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » OnePlus » वनप्लस एक्स, अक्टुबरमा आइपुग्नेछ
नक्कली !! (कम्तिमा छविहरू)
LG ले LTE कनेक्टिविटीको साथ वाच अर्बानको दोस्रो जेनरेशन प्रस्तुत गर्दछ
Nexus 240P बाट Spectacular 6fps भिडियो